Banyere anyị - AlorAir
AlorAir e tọrọ ntọala na nkà ihe ọmụma nke na-enye uru, ụlọ ọrụ na-eduga atụmatụ na arụmọrụ tinyere pụtara ìhè ahịa nkwado. Olee otú anyị pụrụ isi mezuo nke ahụ? Na ụwa-klas n'ichepụta ike, ọtụtụ R & D ụlọ ọrụ na raara onwe ya nye ìgwè ndị enyi na-akwado gị tupu mgbe ire ere.
Na America, anyị nwere nkesa n'ógbè nlekọta ọrụ na n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ọdịda anyanwụ nke ụsọ oké osimiri na a na-eto eto na netwọk nke na-ere ahịa na ndị nkesa. Anyị na-enwe alaka Europe, Australia na Asia.
Anyị ngwaahịa akara a ugbu a lekwasịrị anya abụọ ahịa - n'okpuru ala / crawlspace na iju mmiri / mweghachi.
Maka iju mmiri / mweghachi ahịa, anyị nwere a zuru akara nke dehumidifiers - ma kwụ na vetikal na ikuziri. Na a Nchikota klas eduga atụmatụ, dị iche iche na ikike nhọrọ, ma na udo nke mmezi, na dehumidifiers bụ n'aka na-ọkacha mmasị. Iji ịja ndị dehumidifiers, anyị nwere blowers na hepa scrubbers aka na ihicha na remediation mgbalị.
Anyị crawlspace na n'okpuru ala nkeji na-enwe na klas na-eduga atụmatụ dị ka digital akara, mfe, ikwunye-n-play mmiri na ọbụna ihe integrated ghọọ mmanụ na anyị kwụ crawlspace unit! Tinye ka atụmatụ ndị a, kọmpat fechaa imewe, dị iche iche na filtration nhọrọ, ime akara na ducting nhọrọ, a nkeji ga-ụtọ site installers na ahịa.
AlorAir ngwaahịa nwere dị iche iche certifications dabere na ha bu n'obi iji tinyere Energy Star nhọrọ, OA, ETL SAA, SGS na TUV. Anyị na ngwaahịa na-e, mepụtara na-anwale ka amụma mkpuchi kasị elu larịị nke àgwà ahịa anyị. Anyị engineer-anọgide na-asọ envelopu maka ọhụrụ arụmọrụ etoju na atụmatụ ime ahịa anyị.
Anyị ozi bụ mgbe niile innovate na-enye nke kacha mma na ngwaahịa ndị kacha uru. AlorAir kwere nkwa ahu nagide ihe kasị mma onwunwe, nkà na ụzụ, na ngwá na mgbe-ire support-eme ka a ozi a eziokwu na anyị ahịa.